Daawo Jaaliyada Maraykanka Ee Somaliland Oo Si Wayn UTabay Dr. Sacad Sheekh Cismaan Nuur Oo Ahaa Safiirkii Ugu Aqoonyahan Ku Xeer Dheer Siyaasada Arimaha Dibada
Wednesday August 16, 2017 - 16:07:06 in by Abdikarim Saed Salah
Washington (Horseednews.com) Daawo Jaaliyada Maraykanka Ee Somaliland Oo Si Wayn UTabay Dr. Sacad Sheekh Cismaan Nuur Oo Ahaa Safiirkii Ugu Aqoonyahan Ku Xeer Dheer Siyaasada Arimaha Dibada
Dr Sacad Sheekh Cismaan
Dr Sacad Sheikh Cisman Nuur Waa Wakiilkii Somaliland Ee Madaxweyne Maxamed Ibrahim Cigaal U Magacaabay Dalka Maraykanka. Sidoo kale na Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin mar kale u Magacaabay Wakiilka Somaliland Ee USA
Waa Aqoonyahan ku Xeel dheer Xidhiidhka Caalamiga ah. Wuxuu si joogto ah ugasoo baxaa saxaafada Maraykanka iyo ta dunida Islaamka. Waa Xeeldheere laga waraysto Bariga Dhexe iyo Dawladaha Islaamka. Xilligii uu ahaa Wakiilka Somaliland Ee USA si Bille ah ayuu ugasoo muuqan jirey saxaafada Maraykanka iyo Geeska Afrika. Waxa laga wareysan jirey Qaddiyada Somaliland. BBC , VOA, Al Jazira waxay ahaayeen, yihiina ilaa maanta kuwa uu kasoo muuqdo ama laga Maqlo. Waxa ugu dambaysay inqilaabkii Turkiga. Wakhtigiisii Wuxuu Xoojiyay Xidhiidhka Somaliland iyo Maraykanka. Waxa laba Jeer Washington tagay Madaxweyne Cigaal iyo Rayaale. Waxa uu suurto galiyay in Kaaliyihii hore ee Xoghayaha Arimaha Dibadda Ee USA ee Qaarada Afrika Jandy Frazer Hargeisa ka tagto
Markii uu Kulmiye Xukunka yimid waxa si dhib yar loo badalay Khabiirkii Somaliland ee USA. Waxaana lagu badalay Rashiid Garuf oo si joogto ah ugu soo bixi jirey maqaalada ra’yiga Dadweynaha ah ee uu ku qoro Websiteyada Somaliland. Isaga Oo dhaliili jirey Xukuumadii Rayaale.
Waa Muwaadin ku mashquulsan Nolosha qoyskiisa gaarka ah. Ma leh Khibrad iyo Xidhiidh Caalami ah oo uu Somaliland uga samayn karo USA. Laguma arko Saxaafada Caalamiga ah iyo tan Maxalliga ah ee Somaliland midna. 6 sano oo uu Wakiil ahaa wali shacabka Somaliland ee Maraykanku muuqaalkiisa ma yaqaanaan badankoodu.
Wakhtiyo Kala duwan Jaalliyadaha Somaliland ee USA waxay Xukuumada Kulmiye ka codsadeen in Maraykan loosoo magacaabo Masuul Somaliland Xidhiidh u samayn kara. Waxa la ii sheegay in sidaas uu hadana Mushaharka ku helo isagoo shaqo u gaar ah usbuuca oo dhan ku mashquulsan. Mar aan usii dhabo galayna waxa la ii sheegay inuu yahay nin buur ku tiirsan oo aan dhayal lagu badali karin! Tani waa qayb yar oo ka mid ah siyaasadii Dibada Ee Somaliland ee Garaaci jirtey albaabada Washington, Pretoria iyo London, oo maantana kusoo ururtey agagaarka Jigjiga, Kililka Somalida Itoobiya!
Halkan Ka Daawo: Kulamadii Taarikhiga Ahaa